How To Become A Programmer ! - A Programmer
A Programmer, 12 months ago 82min read 8747
programming လောကထဲသို့ ခြေလှမ်းအစ (သို့) programmer တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဒီ article ကတော့ ကျောင်းပြီးခါစ လူတွေ၊ programming ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအတွက်ပါ။
အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ programmer တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထက် programmer တစ်ယောက်ကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကို နားလည်ထားရပါမယ်။ အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် programmer ဆိုတာ code ရေးတယ်ပေ့ါ (ရှင်းသွားတာပဲ :3)။ ဆိုလိုချင်တာက concept / design တစ်ခုရှိမယ်၊ အဲ့ဒီ concept အတိုင်းရအောင် code တွေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ computer ကို execute လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပါပဲ၊ ပိုပြီးမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် web developer က website design တစ်ခုကို ရထားတယ်ဆိုပါစို့ အဲ့ design အတိုင်းထွက်အောင် code တွေနဲ့ ဖန်တီးပေးလိုက်တာပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် နားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်၊ programmer တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုဆက်ပြောကြတာပေါ့။
programming ကလွယ်တယ်ခက်တယ် ဆိုတာတော့ ကျနော် define မလုပ်ချင်ပါဘူး၊ လေ့လာတဲ့လူရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု နဲ့ ကြိုးစားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဒါတွေကစကားပြောသွားမှာပါ။
programmer တစ်ယောက်စလုပ်တော့မယ်ဆို ဇွဲ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ နေ့တိုင်း challenging အသစ် အသစ်တွေကရှိနေတဲ့ အတွက် ဒါကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။
programmer တွေက ကိုယ့် boss အတွက်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့် အတွက်ကိုယ်လဲအလုပ်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ideas တွေရှိခဲ့ရင် self-creation လုပ်လို့ရတယ်လို့ ပြောတာပါ။ Why you wanna start programming ? ဒီအချက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ဘာလို့ဒါကိုလေ့လာချင်တာလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ career အဖြစ်လုပ်မှာလား၊ Just Hobby ပဲလား၊ Idea တွေရှိလို့ ကိုယ့်ဘာသာအကောင်အထည်ဖော်ချင်တာလား၊ ကိုယ်က programmer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်မှု ကောင်းကောင်းရှိရဲ့လား စသည်ဖြင့် ဒါတွေကို သေချာစဉ်းစားရပါမယ်။
OK! ကိုယ်က သေချာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ ၊ I gonna do this ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ်လုပ်မယ့် sector ကိုရွေးဖို့လိုပါမယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဆိုရင်တော့ ဒါတွေရှိပါမယ်။ article ရှည်သွားမှာဆိုးလို့ ဘယ် position ကဘာတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ယေဘုယျ ပဲ ကျနော် ပြောသွားပါမယ်။
web ဆိုတဲ့ အတိုင်း website/ web application တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ရတာပါ၊ သူ့ကိုထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင် Frontend developer(Design), backend developer(Logic action) fullstack developer (everything to buildaweb project.)
Desktop Programmer – desktop application တွေရေးသားပါတယ်။
Data Scientists – အများစုကတော့ python သုံးပြီးတော့ scientific data တွေကို analyse and manipulate လုပ်ပါတယ်။
Database Administrator – အရေးပါတဲ့ data တွေကို securing, organising, and analysing လုပ်ပါတယ်။
Mobile Developer – mobile applicaiton တွေကိုရေးသားပါတယ်။ OS ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Android developer နဲ့ Ios developer ဆိုပြီးတော့ ကွဲပါတယ်။
DevOps – Project တွေရဲ့ Server Architecture ပိုင်းတွေကို handle လုပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်တစ်ခြား roles တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ကျနော်လက်လှမ်းမှီသလောက် Road Map လေးတွေလည်း ရေးပေးလိုက်ပါမယ်။ Road Map ဆိုတာကတော့ Beginner level ကနေစပြီး professional ဖြစ်တဲ့အထိဘာတွေလေ့လာသွားရမလဲဆိုတဲ့ guide သဘောမျိုးပါ။
Game Developer Roadmap:
Data Scientist Roadmap:
iOS Developer Roadmap:
React Developer Roadmap:
ဘာလုပ်ရမလဲမသိသေးဘူး၊ စဉ်းစားနေတုန်းဆိုရင်လည်း Language တစ်ခုခုအရင်လေ့လာရင်းစဉ်းစာတာကောင်းပါတယ်။ Python, Js , Java etc. တစ်ခုခုကိုလေ့လာထားပါ။
2019 မှာ hot ဖြစ်နေတဲ့ language တွေပါ။ https://codinginfinite.com/best-programming-languages-to-learn-2019/. လေ့လာတဲ့နေရာမှာလဲ တစ်ခု ရွေးပြီးပြီဆို ဆုံးခန်းတိုင်တဲ့ အထိ လေ့လာပါ။ ဒီတစ်ခုမပြီးသေးဘူး နောက်တစ်ခုလေ့လာတယ်ဆို အကုန်အခက်အခဲတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ တစ်ခုကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရသွားပြီဆို နောက်ဟာတွေ Learn လုပ်ရတဲ့နေရာမှာလဲ လွယ်ကူလာမှာပါ။
အားလုံး ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Learn & Practice လုပ်ရမှာပါ။ Program အသေးလေးတွေစမ်းရေးကြည့်ပါ၊ community ထဲက activity တွေကို catchup လုပ်ပါ။ နေ့တိုင်း practice & learn လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ programming language တွေမှာ fluent ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ Building A Portfolio Of Work, ကိုယ်ဘာတွေလုပ်ထားဖူးတယ်၊ ဘယ်လောက်အထိလုပ်နိုင်တယ် စတာတွေကို Proof of work အနေနဲ့ showcase လုပ်ထားပါ။ အလုပ်ဝင်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြား freelancing ပဲလုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းကောင်း အသုံးဝင်မှာပါ။
See Ya, Never Stop Learning!
Thankyou so munch
khun maung dwe
Yes, Check the course page.
Khun R K
ကျေးဇူးပါဗျ ဝါသနာကို ဆက်ပြီးအ ကောင်ထည်ဖို့ နည်းရလိုက်ပါတရ်ဗျ
Zaw Zaw Phyo's
It is really supposed for achievement
Web Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလေ့လာရမလဲ၊ (Basic To Advance) - A Programmer
[…] ကျနော်အရင်က programmer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လေ့လာရမှာတွေရေးခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒါကတော့ general ပေါ့လေ၊ ဒီ link မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။https://www.aprogrammer.blog/2019/12/12/how-to-become-a-programmer/ […]
Zuu Zuu Maung
ဆရာတို့တင်တဲ့ blogထဲက linkတွေက ဝင်မရလို့ ဘယ်လိုဝင်ရမလဲရှင့်
Which links sis ?